April 16, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 16th, 2017'
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta soo gaaray Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusunna Wal Jameeca, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo wafdi balaaran ee uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Gobolada Dhexe Saadaq Sheekh Yuusuf, iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamaulkaasi. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde …
Madaxweynaha Gobolada Dhexe ee Ahlusunna (VIDEO)
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka, oo uu ka mid yahay Wasiirka Arimaha Gudaha, Saraakiil Ciidan iyo xubno kale oo kamid ah dowladda Federaalka. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wada …
Ciidamada amaanka ayaa maanta toogasho ku dilay labo nin oo la sheegay in hoobiyaal ay ku garaaceen xaafado katirsan Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, hoobiyaashaasi oo ka dhashay khasaaro naf iyo maalba isugu jira. Hoobiyaasha qaarkood ayaa ku dhacay Xaafada Ceel Qalaw iyo dhanka Dan wadaagaha, waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen sadex qof …
Ragii Hoobiyeyaasha Tuuray (VIDEO)
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay qabteen raggan iyo gaarigii ay wateen, sida Saraakiil ka tirsan ciidamada NISA ay u xaqiijiyeen warbaahinta. Sarkaalka u hadlay ciidamada NISA ayaa sheegay in mid ka mid ah raggii hoobiyeyaasha tuuraayay ciidamada ay dileen, xilli raggaan ay isku dayeen inay iska caabiyaan ciidamada ammaanka.
DEG-DEG: Rag Hoobiyeyaal Tuuri Rabay oo Maanta Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
Ciidamada Sirdoonka ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta toogtay qaarna gacanta ku dhigey rag sida la sheegay ku mashquulsanaa tuurista Hoobiye lagu carqaladeynayo ammaanka Magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay qabteen raggan iyo gaarigii ay wateen, sida Saraakiil ka tirsan ciidamada NISA ay u xaqiijiyeen warbaahinta. Sarkaalka u hadlay ciidamada NISA …